DEG DEG:- Dagaal u dhaxeeya ciidanka NISA iyo koox maleeyshiyo ah oo haatan soconaya – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DEG DEG:- Dagaal u dhaxeeya ciidanka NISA iyo koox maleeyshiyo ah oo haatan soconaya
Wararka naga soo gaaraya gobolka Galgaduud ayaa waxay sheegayaan in ciidamada nabad-sugidda NISA ee ka howlgala maamulka Galmudug iyo maleeyshiyo isbaaro u tiilay uu dagaal haatan ku dhexmaraayo duuleedka deegaanka Godinlabe oo gobolkaasi ka tirsan.
Dagaalka ayaa sida la sheegay bilawday kadib markii ciidamo ka tirsan kuwa nabad-sugidda NISA ee maamulka Galmudug ka howlgala ay weerar xoogan ku qaadeen maleeshiyo la sheegay inay isbaaro dhigatay oo dadka safarka ah lacago baad ah ka qaadi jiray.
Mid ka mid ah dadka goob-joogayaasha ah oo la hadlay warbaahinta Muqdisho ayaa sheegay in dagaalka uu haatan si culus u soconaayo, isagoona tilmaamay in labada dhinac ay isku adeegsanayaan hubka noocyadiisa kala duwan.
Ilaa iyo haatan lama oga qasaaraha dhabta ah ee ka dhashay dagaalkaasi, iyadoona dagaalkaan uu kusoo beegmaya xilli maamulka Galmudug uu horay ugu dhawaaqday in ay dagaal la gali doonto maleeshiyaadka isbaarooyinka u yaalo deegaanada uu ka taliyo maamulka.
Dhinaca kale, weli dagaalkaan kama aysan hadlin saraakiisha ka tirsan ciidamada NISA ee ka howlgala maamulka Galmudug, waxaana weli magaalada ka soconaayo dagaal aad u culus oo dhawaqa rasaasta si aad ah loo maqlaayo.